ရူသာဖော်ဒီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
လော်ရန်စီယမ် ← ရူသာဖော်ဒီယမ် → ဒပ်ဘ်နီယမ်
1st: 580 kJ/mol
2nd: 1390 kJ/mol
3rd: 2300 kJ/mol
အားနပ်စ် ရူသာဖို့ဒ် ကိုအစွဲပြု၍
အတည်ငြိမ်ဆုံး ရူသာဖော်ဒီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 70 s >80% α 8.28 257No
syn 1.1 min SF
ရူသာဖော်ဒီယမ် (Rutherfordium) ဒြပ်စင်သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု အလွန်မြင့်မားသည့် ဒြပ်စင်တခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဓာတ်ခွဲခန်း၌သာ ဖန်တီးထုတ်ယူ ရရှိ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏သင်္ကေတမှာ Rf ဖြစ်ပြီး အက်တမ်အမှတ်စဉ် (atomic number) ၁၀၄ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အတည်ငြိမ်ဆုံး အိုင်ဆိုတုပ် အမှတ်စဉ်မှာ 265Rf ဖြစ်၍ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် သက်တမ်းဝက် (half-life) မှာ ၁၃ နာရီဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ လွှမ်းမိုးမှုများသော ဓာတ်တိုးကိန်း (oxidation number) မှာ +၄ ဖြစ်ပြီး RfC62- ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော ဓာတ်ပေါင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Rutherfordium ဒြပ်စင်၏ အမည်သည် နျူကလီးယားရူပဗေဒ (nuclear physics) ဘာသာရပ်၏ ဖခင်ဟု လူသိများသော အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင် Emest Rutherford ဂုဏ်ပြုသောအနေဖြင့် သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Rutherfordium ဒြပ်စင်၏သက်တမ်းဝက်(half-life)သည် ၁၀ မိနစ်ခန့် အလွန်တိုသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရန်မလိုပါ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ Rutherfordium။ Royal Chemical Society။ 2019-09-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၆ Hoffman၊ Darleane C.; Lee၊ Diana M.; Pershina၊ Valeria (2006)။ "Transactinides and the future elements"။ in Morss; Edelstein၊ Norman M.; Fuger၊ Jean (eds.)။ The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.)။ Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media။ ISBN 978-1-4020-3555-5။
↑ "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals" (2011). Physical Review B 84 (11): 113104. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104. Bibcode: 2011PhRvB..84k3104O.
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Sonzogni, Alejandro။ Interactive Chart of Nuclides။ Brookhaven National Laboratory။ 2008-06-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Neutron-deficient superheavy nuclei obtained in the 240Pu+48Ca reaction" (30 January 2018). Physical Review C 97 (14320): 014320. doi:10.1103/PhysRevC.97.014320. Bibcode: 2018PhRvC..97a4320U.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရူသာဖော်ဒီယမ်&oldid=722895" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။